Ogadentoday Press » OLF, Iyo Itoobiya oo heshiis kala saxiixday! ONLF maxaa looga war-wareegayaa?
OTP- Jabhada ONLF, Oromo Liberation Front- Xoreynta Oromiya ayaa heshiis qalinka ku duugay sida Dowlada Itoobiya Iyo Maamulka Jabhada xaqiijiyeen.
Heshiiskan ayaa ka dhacay caasimadda Asmara kaddib markii booqasho uu ku tagay Wasiirka Arrimaha Dibada Itoobiya Worker Iyo Madaxweynaha Oromiya Lemma Megase.
Wasiirka warfaafinta Eritrea Yemane Gebremeskel ayaa sheegay in hadda wixii ka danbeeya uu soo dhamaaday dagaalkii OLF Iyo Dowlada Itoobiya. Dad baddan oo Soomaali ah ayaa u hanqal taagaya in hesshiiska ONLF ku xigi doono laakin wali ma cadda.
Heshiiska ONLF ayaa ooga duwan midkan OLF labba arrin oo u baahan in dadku fahmaan. mida koobaad ayaa ah in dadka wadda hadlayaa yihiin dad wada dhashay labbo in OLF hadda aad moodid in barnaamijkeedii siyaasadeed ee ahaa In Oromiya go,do laga tanaasulay.
Shakiga hadda jira ayaa ah in Oromo waddo qorshe ah in ONLF aan la fahmi karin waayo waxa rabto oo ah qaddiyad weyn oo Soomaalinimo ahna in dhulkan Itoobiya ka go,o ama khayraadka dhulkan la siiyo in ka baddan 40% midan Oromo ma rabto waxaana moodaa in iyadu rabto in mustqablka shidaalkan iyo dhulkan is tustay riyo been ah oo ah inaan yeelan karno!
Maamulka Oromo oo Dad soomaali ah ka helaya taageero iyo warbaxino qalad ah oo ah in ONLF matasho hal qabiil isla markaasna halkaa qabiil xaq aysan ahayn in Itoobiya ka go,aan ay ka dhaadhacinayaan in arrintan la baajiyo!
Maalmahan ayaa weerar lagu qaaday Jigjiga si qorshahaas qayb ka mid ah loo fuliyo!